Amaqhinga angama-20 okushefa okuphelele | Amadoda aSitayela
El ukushefa okuphelele, leli gama elizwakala futhi emakhanda ethu nokuthi singathanda ukugcwaliseka ngaso sonke isikhathi. Izikhathi eziningi ekugijimeni asazi ngomonakalo esiwenzayo esikhunjeni sethu ngokushefa ngokushesha nokugijima.
Ngezeluleko engiziphakamisayo namhlanje, uzokwenza le nqubo yokushefa ibe yindlela yokwelapha ubuhle obumnandi.
Vumela isikhumba sakho sithathe isikhathi saso. Lapho nje sivuka, isikhumba sethu sesivuvukele futhi sinalowo muzwa wobuso obuzele. Uma ushefa okokuqala ekuseni, vumela okungenani imizuzu eyi-10 kudlule ngaphambi kokuba uqale ukushefa ukuze uzinike indawo engcono ongasebenza kuyo.
Lungisa isikhumba. Ukuqala ukushefa, kubaluleke kakhulu ukuthi uqale uhlanze isikhumba sakho ngamanzi abandayo ukusisebenzisa. Uma sigezwa ngamanzi ashisayo, isikhumba, ngaphezu kokuthi somile ngokweqile, singadala ukucasuka ngemuva kokushefa, futhi size siphule nemithambo yegazi emincane.
Ungagundi nsuku zonke. Uma ungumuntu oshefa nsuku zonke, vumela isikhumba sakho siphumule ngaphandle kokukushefa okungenani kanye ngesonto. Thatha ithuba uzenzele okuhle isiko lobuhle ukunikeza umthamo owengeziwe we-hydration bese uphumula ebusweni bakho.
Faka imali kumikhiqizo emihle. Uma ungomunye walabo abashefa ngebhulashi, tshala imali kulo. Kubalulekile ukuthi ukhethe ikhwalithi eyodwa ukuze wakhe isilonda esicebile futhi esinokhilimu lapho ngaphambi kokushefa kukusiza ukuthi uphakamise izinwele ukuze uthuthukise ukushefa futhi ukhiphe isikhumba ngokuqeda amaseli afile.
Ungagundi ngokuxhamazela. Imvamisa amadoda ahlulwa noma ashe ngenkathi eshefa, yilabo abashefa ngenkulungwane ngehora futhi abasebenzisa ukunyakaza okude nobanzi. Kungcono ukuthi uhambe kancane kancane unakekele isikhumba sakho ngenkathi ushefa.
Faka ijeli lokushefa emibuthanweni. Ukuze isatshalaliswe kangcono kukho konke okunye, sebenzisa ijeli yakho yokushefa emibuthanweni emincane ngosizo lweminwe yakho, uvumele umkhiqizo uphumule futhi ungene kahle ebusweni bethu.
Slayida, ungacindezeli i-blade. Kuyinsumansumane ukuthi uma ucindezela kakhulu i-blade, ukushefa kuseduze. Ukuphela kwento ozoyenza ukucasula nokulimaza isikhumba. Slayida ngobumnene i-blade ungene kuye ayenze konke okunye.
Ukushefa uwoyela, ukunakekela ubuso. Uma ufuna ukushefa kwakho kube bushelelezi, faka uwoyela wokushefa ngaphansi kwegwebu lokushefa, ukhilimu noma ijeli ovame ukusebenzisa.
Vumela udebe lwakho lwaphezulu lube yinto yokugcina oyoyiphuca. Izinwele esinazo endebeni engenhla zinzima kunezinye izingxenye zobuso bethu, futhi kungcono ukumanzisa ukhilimu wokushefa kahle ukuze izinwele zithambe, ngakho-ke, kungcono ukuthi kube yindawo yokugcina esishefa ngayo.
Shefa ngesihlambi esishisayo. Uma ufuna ukushefa ngokunethezeka, ungakwenza eshaweni. Umusi ovela eshaweni esishisayo uzosiza ukuvula izintambo zezinwele futhi uzithambise ukuze sikwazi ukuziphucula kangcono.
Ungalokothi uphuce okusanhlamvu. Uma wenza njalo, okuwukuphela kwento ongayikhiqiza ebusweni bakho ukucasuka nokulimala kwesikhumba.
Sebenzisa imikhiqizo ezwelayo uma isikhumba sakho sizwela. Ungabi nolaka, futhi uma uqaphela ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho uphuca izinwele unesikhumba, kungenzeka ukuthi isikhumba sakho siyazwela. Uma kunjalo, unganqikazi ukusebenzisa imikhiqizo ethile yohlobo lwesikhumba sakho.
Uma ungenasikhathi ekuseni, shela ebusuku. Izikhathi eziningi asinaso isikhathi sokugunda uthule ekuseni, ngakho-ke gunda ebusuku ukuze kuthi ngemuva kokugunda, unikeze isikhumba sakho amahora angama-8-10 okuphumula okugcwele.
I-aloe vera, umngane wakho omkhulu. Kubo bonke labo abahlushwa ukucasuka, futhi banesikhumba esibucayi, into enhle kakhulu ngemuva kokushefa ukufaka ijeli le-aloe vera ebusweni. Kuzosiza ukudambisa nokuqinisa isikhumba sakho futhi kunciphise ukucasuka.
Bheka isimo sensingo yakho. Izikhathi eziningi asazi ukuthi izindwani zommese zigqokwe nini. Zishintshe ngokushesha nje lapho ukuqaphela, ngoba uma kungenjalo, ukuphela kwento ozoyibangela isikhumba sakho ukubomvu nokucasuka. Uma uphuca nsuku zonke kunconywa ukuthi ushintshe i-blade kanye ngesonto, ikakhulukazi uma intshebe yakho inzima.
Sifihle ukusikeka. Uma uzisike ngensingo, zama ukufihla ukusikeka bese uwafaka ngemikhiqizo ethile yokushefa.
Qeda ngemuva. Iningi lazo linotshwala obuningi, futhi abakwenzayo ukomisa isikhumba nokwandisa ubungozi bokucasuka futhi kuthinte umgoqo wokuzivikela wesikhumba, kusheshise ukuguga ngaphambi kwesikhathi kwesikhumba. Esikhundleni salokho, sebenzisa ibhalsamu ngemuva noma umswakama ukumthulisa futhi ubuyisele umgoqo we-hydration.
Imikhiqizo ebandayo ngemuva kokushefa. Ukufaka ibhalsamu elwa nokuvuvukala kunconywa kakhulu uma usuphuce. Uma kungenjalo, kuhle futhi ukufaka i-ice cube esikhunjeni.
Njalo manzi isikhumba sakho ngemuva kokushefa. Noma isikhumba sakho sibonakala sibushelelezi uma usuphuce, udinga ukusinisela, ikakhulukazi uma unesikhumba esomile. Khumbula ukufaka isikhumba emanzini kabili ngosuku, ekuseni nasebusuku, ngemuva kwenqubo yokuhlanza ubuso.
Funda ukushefa. Akukho lutho olubi ngokwedlulele kunokuthi basitshele ukuthi asazi ukuthi kufanele sigundwe kanjani, kepha kaningi kuyadingeka ukuthi ufunde ukukwenza kahle ukuze ungazisiki futhi ucasule isikhumba sakho.
Impela ngemuva kwalezi zindlela ezingama-20 kusukela manje uzonikeza ukugqama okuthe xaxa nesikhathi sokushefa ukuze iphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Amaqhinga angama-20 okushefa okuphelele
Ngingathanda ukuthola imikhiqizo yokushefa
Phendula i-yeudi matos
Ijakhethi yesikhumba. Okwakudala phakathi kwezakudala